Zvemagariro Kuzivisa Mukati meGoogle Analytics | Martech Zone
Zvemagariro Kuzivisa Mukati meGoogle Analytics
China, June 14, 2012 Chitatu, June 13, 2012 Jenn Lisak Golding
Kutevera kuwanikwa kweGoogle kwePostRank, nhoroondo yehukama yakagadziridzwa mukati meGoogle Analytics kuisa mishumo mishanu. Iyi mishumo "zvibodzwa" zvemukati zvichibva pahuwandu hwemashoko akagamuchirwa, zvinongedzo, zvinotaurwa, maTweets, uye mamwe mamidhiya enhau enhau. Chirevo chega chega chinopa njere dzakasiyana dzezvakasiyana zvehukama hwehukama / zvido zvekutarisa.
1. Pfupiso Mushumo, iyo inoratidza kukanganiswa kwemasocial media pane zvemukati. Chirevo ichi chinokanganisa zvirimo ne "Kudyidzana Kwekupedzisira" uye "Kubatsira Kutaurirana Kwemagariro." Semuenzaniso, iwe unogona kuziva yekupedzisira nguva iyo mushandisi akatarisa zvemukati zvako kuburikidza nesocial media chikuva, uye yekupedzisira nguva vashandisi chaizvo vese vakawaniswa uye vakashandurwa kuburikidza nesocial media chikuva.
Mukati meGoogle Analytics, iyo yemagariro tebhu iri pasi peiyo Standard Reporting sarudzo.
2. Chirevo chekushandurwa, iyo inokutendera iwe kuti uteedzere saiti kana peji yakatarwa mitengo yekutendeuka. Semuenzaniso, iwe unogona kuchengeta kuverenga kwenhamba yenguva iyo "Ndatenda nekupindura" kuratidza peji, iyo inopa chiratidzo cheiyo nhamba yemablog blog akagamuchirwa. Nokuwedzera, izvi zvinokuudza kuti yakawanda sei blog iri kuita vatengi kana vaverengi.
Mukati meGoogle Analytics, tsvaga iyo Shanduko Chirevo pasi peTraffic Source> Zvemagariro> Shanduko.
3. Zvemagariro Sosi, iyo inokutendera iwe kuyera budiriro yezvinyorwa pane chaiwo masvikiro. Semuenzaniso, unogona kutsvaga kuti kushambadza kwakafamba sei paFacebook uye kuti kushambadza kwakafanana kana chimwewo shambadziro chakafamba sei pa Twitter, nezvimwewo.
Mukati meGoogle Analytics, tsvaga Zvemagariro Zvemukati muyakajairika Kuzivisa tebhu pasi peTraffic Source> Zvemagariro> Zvinyorwa.
4. Social plugins, iyo inoyera huwandu hwezvikamu zvirimo zvinogamuchirwa, zvichinyatso kuyera mukurumbira weblog, infographic, kana zvimwe zvemukati zvakatumirwa. Iyi ndiyo barometer inoshanda zvakanyanya yekuona kufarirwa kwemashambadziro mumapuratifomu akasiyana enhau.
Mukati meGoogle Analytics, tsvaga iyo yekugovana mishumo mu Standard Rondedzero tebhu pasi peTraffic Source> Yemagariro> Mapulagi
5. Chiitiko Rukova, inova yekuwedzeredzwa kweSocial Plugins mushumo, ichipa ruzivo rwakadzama se URL yezvinyorwa zvakagovaniswa, maitiro ekugovana, kupi uye riini kugovana kwakaitika, kuzivikanwa kwevanhu vakaigovana, uye makomendi akaitwa paunenge uchiita mugove.
Mukati meGoogle Analytics, iro Rakaitika Rukova rinowanikwa muStandard Reporting tebhu pasi peTraffic Source> Zvemagariro> Zvinyorwa> Chiitiko Chekuita tab.
Kuwana idzi nhoroondo kuri nyore. Simply kusaina kana kupinda mukati www.google.com/analytics/, wedzera iyo URL yewebhu webhusaiti inoteedzerwa, teedzera iyo inogadzirwa yekutevera kodhi kune peji rega riteedzwe, uye wagadzirira kuenda!
Tags: Activitygoogle analyticsevanhu vezvenhauZvekutaura Zvemagariro
Maitiro Ekutanga-Kutenga evatengi
10 Mirairo yePinterest yeBhizinesi
Jun 15, 2012 pa9: 34AM
Kana iwe uchishingairira pasocial media (uye iwe unofanirwa kuve!) Zvakakosha kuti utarise kubudirira. Izvi zvinogona kubatsira kutungamira zano rako kuenda kumberi. Semuenzaniso, kana iwe ukaona kuti Twitter zvirevo zviri kushandura zvirinani pane Facebook, zvine musoro kuisa yakawanda yekuedza kwako ipapo.